Ithegi: ukuthengisa | Martech Zone
Soloko Uzivalela: I-10 Statistics Ukuqhuba ukuTshintsha kweNtengiso
NgeCawa, Meyi 29, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Iqela lakwaMicrosoft libeke iphepha elimhlophe elimhlophe kwimiceli mngeni kunye nempumelelo yemibutho yokuthengisa, imveliso yabo, kunye nokukwazi ukuziqhelanisa nokwamkela iteknoloji. Sihlala sidibana neenkampani ezifumana iziphumo zentengiso ezinomdla ezivela kwilizwi-lomlomo nangobizo olubandayo. Andikhe ndithandabuze ukuba esinye sezi zicwangciso ziyasebenza-ewe ziyasebenza. Iindlela zokuthengisa kwiinkampani ezininzi azitshintshanga kwisithuba seminyaka elishumi. Ngelishwa, kuba yintoni
NgoMvulo, Aprili 6, 2015 NgoLwesibini, Aprili 7, 2015 Douglas Karr
Esona sikweko siqhelekileyo sisisebenzisa xa sithengisa iinkonzo zethu, sichaza inkqubo yethu, kwaye simisela izinto esizilindeleyo kwithemba lethu lixoxa ngokutyala imali. Ngokuphindaphindiweyo, siva kubaxumi abathi: Sizamile [faka isicwangciso sokuthengisa] kwaye ayisebenzi. Uzamile ixesha elingakanani? Uqhube kakuhle kangakanani? Loluphi ubungakanani botyalomali olwenzileyo? Masixoxe ngengxowa-mali yakho yomhlalaphantsi… ukuba uyizamile inyanga, awuzange udibane nomcebisi ngezemali,
Yeka ukufihla eyona nto ibalulekileyo kubukho bakho kwiWebhu
NgoLwesine, Novemba 15, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Rhoqo kunokuba kungenjalo, xa ndindwendwela iwebhusayithi ebumbeneyo, into yokuqala endiyijongayo yibhlog yabo. Ngokukrakra. Andiyenzi kuba ndibhale incwadi kubhloga lwendibaniselwano, ndifuna ukuqonda inkampani kunye nabantu abasemva kwayo. Kodwa ndihlala ndingayifumani ibhlog. Okanye ibhlog ikwisizinda esahlukileyo xa sisonke. Okanye ikhonkco elinye kwiphepha labo lasekhaya, elichongiweyo njengebhlog. Eyakho